OnePlus dia miasa amin'ny smartwatch voalohany | Androidsis
Mihabe ny marika finday Android manana ny famantaranandrony manokana. Xiaomi dia ohatra tsara amin'izany, izay hamela antsika afaka ora vitsivitsy miaraka amin'ny famantaranandrony. Na dia tsy ho tokana fotsiny aza ny marika sinoa, satria misy marika hafa efa miasa amin'ny smartwacht azy ireo, toy ny nitranga tamin'ny OnePlus. Io no lazain'izy ireo avy amin'ny haino aman-jery isan-karazany.
Araka ny efa nianarana, OnePlus dia hamolavola ny smartwatch voalohany, voalahatra ho an'ny 2020. Famantaranandro izay antenain'ny orinasa hijoroana amin'ny marika toy ny Xiaomi, Huawei na Samsung amin'ity sehatry ny tsena ity. Famotsorana izay hahaliana tokoa.
Momba ity famataranandro ity izay mety hivoatra tsy misy angona amin'izao fotoana izao. Tsy fantatray raha hampiasa ny Wear OS eo aminy ny OnePlus, izay safidy mety hanome an'ity rafitra fiasa ity hanery vaovao, na raha hampiasa ny rafitr'izy ireo manokana na iray hafa izy ireo. Tsy misy fantatra momba ny endrika ihany koa.
Ity smartwatch ity dia antenaina ho ofisialy amin'ny taona 2020. Ny marika sinoa dia hampahafantatra ny andiany finday manaraka amin'ny lohataona amin'ny taona ho avy. Ny haino aman-jery miresaka momba ny fisian'ity famataranandro ity dia manome sosokevitra fa hahatratra ny tsena amin'ireo karazana finday ity izy.
Tsy nanamafy na inona na inona momba ny fisian'ity famataranandro ity ny orinasa. Mety hahaliana ny inona OnePlus dia tsy maintsy manolotra amin'ity sehatry ny tsena ity. Ny orinasa dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny finday avo lenta amin'ny Android ary izy ireo izao no nitady vahaolana handefa televiziona. Ny smartwatch dia dingana iray hafa amin'ny fanasamihafa anao.
Hihaino tsara isika vaovao bebe kokoa tonga momba an'ity OnePlus Watch ity, satria io fiambenana io dia efa nantsoina tamin'ny haino aman-jery isan-karazany. Satria mbola misy mihoatra ny antsasaky ny taona mandra-pahatongan'ny fitaovana ity hahatratra ny tsena. Ka amin'ity fotoana ity dia betsaka ny vaovao mety ho tonga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » OnePlus dia mety miasa amin'ny smartwatch
ColorOS 7, ny interface custom Oppo, dia efa manana daty famotsorana ofisialy